Blog of Nyein Chan Yar: science n technology news Sept I
(Samsung Gear S )
Samsung ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲက ထုတ်ထုန်သစ်တွေကို မိတ်ဆက် ပြသခဲ့ပါတယ်။ ပထမတစ်ခုကတော့ Gear S လို့ခေါ်တဲ့ smartနာရီဖြစ်ပါတယ်။ Gear S ကတော့ ဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားစရာမလိုပဲ 3G SIM ကဒ်ကို တိုက်ရိုက် ထည့်သုံးရမှာပါ။ ကင်မရာတော့ မပါဝင်ပါဘူး။ screen ကတော့ ကွေးညွတ်ထားတဲ့ 2-လက်မအရွယ် SuperAMOLED screen ဖြစ်ပြီး 360 x 480 resolution ရှိပါတယ်။ dual-core 1GHz ပရိုဆက်ဆာ အသုံးပြုထားပြီး RAMကတော့ 512MBရှိပြီး သိုလှောင်နိုင်မှု ပမာဏ 4GBရှိပါတယ်။ အောက်တိုဘာလမှာ ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကို မကြေငြာသေးပါဘူး။
(Samsungရဲ့ ပုံရိပ်ယောင်မြင်ကွင်းစစ် )
နောက်ထပ် ထူးခြားတဲ့ ပစ္စည်းကတော့ ပုံရိပ်ယောင်မြင်ကွင်းစစ် Samsung Gear VR ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ထုပ်လုပ်လိုက်တဲ့ Galaxy Note4နဲ့ တွဲဖက် အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံကတော့ ဟိုတလောက Google I/O မှာ စက္ကူဗူးလေးနဲ့ စမ်းသပ်ခဲ့ကြတဲ့ နည်းမျိုးပါပဲ။ ဦးခေါင်းမှာ ဝတ်ဆင်ရတဲ့အပိုင်းရဲ့ရှေ့မှာ Galaxy Note4ကိုတပ်ဆင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို 3Dဗွီဒီယိုထဲကို ကိုယ်တိုင် ​ရောက်သွားတာကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လည်း ဗွီဒီယိုတွေ game တွေထည့်သွင်းပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယယ်။ အောက်တိုဘာလမှာ ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းကို မကြေငြာသေးပါဘူး။
related news --- (Google Cardboard)
(နာဆာရဲ့ အကြီးဆုံး ဒုံပျံ)
နာဆာရဲ့ အာကာသ ဒုံပျံစနစ် အသစ်ကို Space Launch System (SLS) ဟုခေါ်ဆိုထားပြီး တည်ဆောက်ဖူးသမျှ ဒုံးပျံတွေထဲမှာ အကြီးဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ အမြင့်ပေ ၄၀၀ရှိမယ့် ဒီဒုံးပျံဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ လွှတ်တင်ဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒုံးပျံနဲ့ အာကာသယာဉ်မှူးတွေကို အင်္ဂါဂြိုဟ်လိုမျိုး ဝေးကွာတဲ့ အာကာသ ထဲအထိ ပို့ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်အတွက် ဒေါ်လာ သန်း၇၀၀၀ လျာထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
(ဂူးဂဲလ်ရဲ့ မောင်းသူမဲ့ကား အဆင်သင့်မဖြစ်သေး)
ဂူးဂဲလ်ရဲ့ မောင်းသူမဲ့ကား ဟာ အများပြည်သူသုံးစွဲဖို့ဆိုရင် အခုလို စီးနင်းသူက လိုအပ်ရင် ထိန်းချုပ်ဖို့ လက်ကိုင်၊ ဘရိတ် လိုမျိုး မပါတဲ့ အတွက် လမ်းပေါ်မှာမောင်းနှင်ဖို့ ခွင့်ပြုချက် မရသေးကြောင်း သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီအပြင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းနေရင် အာရုံခံကိရိယာတွေ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တာကြောင့် ဒီအခက်အခဲကို မကျော်လွှားနိုင်သေးဘူး လို့ သိရပါတယ်။
(Tesla က တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဓါတ်အားဖြည့်စက်များ တပ်ဆင်မည်)
Tesla လျှပ်စစ် ကား ကုမ္ပဏီဟာ တရုတ်နိုင်ငံမှာ ဓါတ်အားဖြည့်စက်များ ၄၀၀ တပ်ဆင်သွားဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဓါတ်အားဖြည့်စက်တွေကို မြို့ပေါင်း ၁၂၀ မှာတပ်ဆင်သွားမှာ ဖြစ်လို့ Tesla ကားဝယ်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေနိုင်တဲ့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံဟာ Tesla အတွက် အလားအလာကောင်းတဲ့ ဈေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ မြို့ကြီးတွေမှာ လေထုညစ်ညမ်းမှု ဆိုးရွားလွန်းတာကြောင့် လျှပ်စစ်ကား ကိုပိုမို အသုံးပြုလိုကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
(နာမည်ကြီးတစ်ချို့ရဲ့ iCloud ကဓါတ်ပုံများ ခိုးယူခံရ)
ဒီတစ်ပတ်ထဲ အင်တာနတ်မှာ ပျံနှံ့နေတဲ့သတင်းကတော့ နာမည်ကြီးတစ်ချို့ရဲ့ iCloud ကဓါတ်ပုံများ ခိုးယူခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ်/။ မင်းသမီး Jennifer Lawrence, မော်ဒယ်လ် Kate Upton, နဲ့ အဆိုတော်Ariana Grande, တို့ရဲ့ ကိုယ်တိုင် iPhone နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံတွေကို hacker တစ်ဖွဲ့က iCloudစနစ်ကို ဖေါက်ထွင်း ရယူသွားပြီး 4Chan ဝဘ်ဆိုက်မှာ တင်လိုက်ပါတယ်။ ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ iCloud Login မှာ brute force attack လုပ်လို့ ရတဲ့အခြေအနေရှိနေခဲ့တာကြောင့် အခုလို လုံခြုံရေး ကျိုးပေါက်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
iPhone6Plus comes in at resolution of 1,920 x 1,080 withapixel density of 401 ppi (pixels per inch) while the iPhone6hasaslightly lower 1,334 x 750 resolution with 326 ppi. feature an upgraded 8 MP rear-facing camera and 2.1 MP front-facing shooter.
Posted by dathana at Sunday, September 14, 2014